Guddiga doorashada Banaadiriga oo Guddoon doortay - Awdinle Online
Guddiga doorashada Banaadiriga oo Guddoon doortay
Magaalada Muqdisho waxaa Galabta kulan ku yeeshay Guddiga doorashada Beelaha Banaadiriga ee nool Caasimadda, iyaga oo kulankooda ku doortay Guddoomiye iyo kuxigeenkiisa.
Xubanah guddiga ookamid ah guddiyada ay magacaawday Xukuumadda Soomaaliya ayaa Guddoomiye u doortay Sacdiyo Aweys Cali Boolaay, halka Guddoomiye Kuxigeen loo doortay Maxamed Xaaji Maye.
Guddiga doorashada Beelaha Banaadiriga ayaa waxaa uu kamdi yahay guddiyada doorashooyinka oo ay diideen Midowga Musharixiinta Madaxweynaaha Soomaaliya, isla markaana ay ku sheegeen in laga soo xulay Hay’adda NISA & Shaqaalaha dowladda.
Maalmo ka hor waxaa guddoomiye iyo kuxigeen doortay Gudiga doorashooyinka Heer Federaal halka shalay si lamid ah ay Guddoon doorteen guddiga xalinta khilaafaadka oo ay xukuumadda Soomaaliya Magacaawday.
Dhamaan guddiyada doorashooyinka Heer Federaal oo ay Magacaawday Xukuumadda Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa doortay guddoono, iyada oo ay harsan yihiin Guddyada doorashooyinka Heer Dowlad Goboleed oo, iyaga oo ka maqan yihiin Guddiyada Maamulada Jubbaland & Puntland uu tababar uga socdo magaalada Muqdisho
Previous articleDEG DEG:- Rag hubeysan oo weerar ku dilay Saraakiil ka tirsan Millateriga Soomaaliya
Next articleSaraakiil & Askar lagu dilay weerar ka dhacay Galgaduud